Kenya oo ka jawaab rasmi ah ka bixisay Go’aankii DFS kuna dhawaaqday War culus - Awdinle Online
Dawladda Kenya ayaa jawaab rasmi ah ka bixisay Go’aankii xalay dowladda Soomaaliya ay dalka uga saartay Safiirkii Kenya ee Soomaaliya Lucas Tumbo,isla markaana ay ugu yeertay Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in aanay soo gaarin warqad rasmi ah oo uga timid Dawladda Federaalka Soomaaliya taas oo ay ugu yeeratay Safiirkeedii Nairobi.
Sidoo kale Dawladda Kenya waxaa ay qoraalkeeda ku sheegtay in ay sii wadayso taageerada ay siiso Shacabka Soomaaliyeed.
Qoraalkii xalay kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha dibada Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay sababta ay tallaabadaas u qaaday ay la xiriirto in Dowladda Kenya ay si bareer ah u faragelinayso Arrimaha gudaha Soomaaliya, iyada oo cadaadis ku haysa Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam, si uu u fuliyo qorshaheeda ku aaddan faragelinta iyo carqaladeynta heshiiskii siyaasadeed ee Doorashooyinka.
Previous articlePuntland oo joojisay in Canshuurta Dekadda Boosaaso lagu qaado Shillin Soomaali
Next articleWasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo ka hadlay xiriirka Kenya